I-GetProspect: Fumana iidilesi ze-imeyile ze-B2B kwaye uLawule uLuhlu lweeProspect | Martech Zone
NgoLwesihlanu, Oktobha 2, 2020 NgoLwesihlanu, Oktobha 9, 2020 Douglas Karr
Nokuba andikuthandi ukugaxelwa, kuya kufuneka ndivume ukuba kukho amaxesha apho abantu bayifumene khona idilesi yam ye-imeyile kwaye banxibelelana nam ngeshishini elisemthethweni. Ngapha koko, ndiqeshe iikontraka ezimbalwa kwaye ndathenga amaqonga ambalwa kwezi imeyile zingafakwanga zithunyelwe kum.
Oko kwathethi, ndilindele imodicum yentlonipho kwezi zonxibelelwano:
Research -Ndifuna ukwazi ukuba ndachongwa ngokukodwa ngenxa yenjongo ethile.
zobuqu -Ndifuna loo mntu andazise kakuhle ukuba yayiyintoni na injongo kunye nolindelo lwabo.
Phuma kuyo -Ndifuna indlela yokuphuma kwisicelo kwaye ungaze ufumane enye i-imeyile ukuba ayisebenzi.
GetProspect Finder ye-imeyile
Kwixesha elidlulileyo, ndiyenzile (igesi) engenakucingelwa kwaye uthenge uluhlu lwe-imeyile eninzi. Lushishino lokwenyani ngokwenene, nangona kunjalo, ke amathuba akho wokonakalisa igama lakho kunye nokuvalwa ngumthengisi we-imeyile aphezulu. Ukuba wenza oku, ungcono usebenze uluhlu ngokusebenzisa isixhobo se-imeyile sobukrelekrele ukuze uqiniseke ukuba awungenisi ii-imeyile zomgibe zogaxekile kunye nee-imeyile eziza kubuyisa.
Ukufumana yingqokelela yokukhangela iidilesi email kudityaniswe nenjini yobukrelekrele egcina iirekhodi zihlaziyiwe. Ngenisa ngokulula iikhrayitheriya zokukhangela kunye ne-imeyile yethu yokukhupha iya kubonelela ngoluhlu lwamagama ngee-imeyile zenkampani, isikhundla, i-LinkedIn ye-URL yegama, igama lenkampani, ishishini, iwebhusayithi, nokunye okuninzi!
Ulawulo lweProspect Prospect Management
I-GetProspect ibonelela ngesixhobo esibonakalayo sokungenisa ngaphakathi, ukukhangela, ukuhluza, ukuhlela kunye nokuthumela kwelinye ilizwe amathemba akho.
Iimpawu zolawulo lweProspect Prospect Management zibandakanya:
izintlu -Qela iiprofayili zakho ezikhutshiweyo kuluhlu. Uku-odola ngegama, inkampani, isikhundla, njl.
Unxibelelaniso -Ngenisa ngaphakathi okanye uthumele kwelinye ilizwe ithemba lakho kwii -apps ezingaphezulu kwama-750 kubandakanya iLinkedin, iSalesforce, iPipedrive, iZoho CRM, iMailchimp, iMeyilegun, kunye G Suite.
iqela -Ungalimema iqela lakho ukuba labelane ngesicwangciso sakho sokunceda ufumane amathuba ngokukhawuleza.
Thumela ngaphandle kwi-Excel -Ukuthumela ngaphandle kufumanise abafowunelwa kwifayile ye-XLS ngee-imeyile ezikhutshiweyo kunye nolunye ulwazi.
Ukungenisa ngobuninzi -Fumana uluhlu lwee-imeyile ngaxeshanye. Ngenisa nje iifayile ezinamagama kunye nolwazi lwenkampani kwaye ufumane ii-imeyile ngobuninzi.
Company Info -Fumana ulwazi oluluncedo olufana newebhusayithi yenkampani, idilesi yendawo kunye nenombolo yefowuni, ubungakanani benkampani, inani labasebenzi nokunye.
Bhalisa kwaye ufumane iidilesi ezingama-200 zamahala
Ukubhengezwa: Ndisebenzisa ikhonkco lam lokudibana Ukufumana - sebenzisa ikhowudi 6rE12 ukuze ufumane iidilesi ze-imeyile ezingama-200!
tags: b2bfumana idilesi ye-imeyilefumana iidilesi ze-imeyilefumana iidilesi ze-imeyile kwi-linkinyiprospectgsuitLinkedInukuthengisa
I-Freshmarketer: Hlaziya, Vavanya, kwaye wenze ubuqu ngale Suite yokuSebenzisa ukuGuqulwa